Vhidhiyo Kucheka, cheka mavhidhiyo ako nenzira inokurumidza uye yakapusa | Linux Vakapindwa muropa
Kunge chero switch, ini ndichiri kurangarira pandakangoshandisa Windows chete. Ini ndinongodzivirira system yaMicrosoft nechikonzero chimwe chete: vane zvese software, mitambo inosanganisirwa, uye isu takawana zvirongwa zvekuti, rega ndishandise izwi iri, kuita chero bhuru. Semuenzaniso, ndinorangarira ndichishandisa yakapusa yakapusa GIF mupepeti wandakawana mhedzisiro uye ini handina kuona chero chinhu chakadai paLinux kana macOS. Kune software inoita zvinhu izvi, asi sarudzo dzakanyanya kuvanzwa uye mashandisiro avo anogona kunge asiri enjere. Iyo haisi iyo nyaya ye Vhidhiyo Trimmer kana isu chatinoda kungocheka vhidhiyo.
Tisati taenderera mberi uye kudzivirira kuvhiringidzika, isu tinofanirwa kutsanangura zvinoreva "kucheka" pano: zvatichaita ndeizvi chinja kureba kwevhidhiyo, Hapana chekubvisa miganho kana kushandura chimiro chevhidhiyo. Vhidhiyo Trimmer chishandiso chakagadzirirwa icho chete uye chega, uye inoita saizvozvo nemapoinzi maviri mairi anomira pachena: zviri nyore uye kuti haina encode vhidhiyo yekutanga.
Vhidhiyo Trimmer inoderedza mavhidhiyo pasina kuidzora
Zvese izvi zvinhu zvinogona kuitwa, semuenzaniso, ne Kdenlive uye OpenShot, asi Vhidhiyo Trimmer haina kana basa nazvo. Kushandiswa kwayo kuri nyore kwazvo zvekuti isu tichazadzisa iyo yakatemwa mumasekondi, tichitevera aya matanho:
Isu tinovhura software. Iyo ingangodaro yakashandurirwa muchiSpanish, uye izvo zvinosanganisira zita, saka isu tinofanirwa kutsvaga "Vhidhiyo Trimmer" kana "Vhidhiyo Trimmer".
Tevere, tinodzvanya pa "Vhura" kuti tivhure vhidhiyo yacho kuti igadziriswe, nekuitsvaga mufaira rekuongorora.
Kana vhidhiyo yacho yangovhurwa, tichaona chimwe chinhu senge tine musoro wenyaya ino: preview, nguva dzekutanga uye dzekupedzisa uye yero bhaa iyo ingaratidza chikamu chatichasiya sechiri kushanda.
Kukamura vhidhiyo yako kuri nyore sekusarudza imwe yedzinotevera sarudzo:
Svetedza micheto yechitsvuku chikamu kuenda kwazvinotifadza.
Seta yekutanga uye yekupedzisira nguva.
Kana tangosarudza chikamu chinotinakidza, tinobaya pa "Zvirimwa".
Iyo faira maneja hwindo ichavhura uye mairi tinofanirwa kuratidza nzira yekuchengetedza iyo yakatemwa vhidhiyo.
Tinobvuma uye tinomirira. Inowanzo tora masekondi kuita chiito, nekuti haina encode chero chinhu.
Vhidhiyo Trimmer chishandiso yakagadzirirwa avo vasingade chero matambudziko. Kana iwe uri mumwe wavo uye uchifarira kuisa iyo, unogona kuzviita kubva pasuru yayo Flatpak, kana kuinyora sezvakataurwa mu peji reprojekti repamutemo:
Nzira iri nyore ndeyekubatanidza dhairekitori neGNOME Builder uye tinya bhatani reKuvaka.
Neimwe nzira, iwe unogona kuivaka nemaoko:
Vashandisi veArch Linux-based masisitimu zvakare vane iyo inowanikwa kubva kuAUR.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Vhidhiyo Trimmer, cheka mavhidhiyo ako muLinux nenzira inokurumidza uye yakapusa